I-Ketchapp isizisela i-Climber Clumsy yokulutha: zisindise ekufeni | I-Androidsis
UKetchapp usizisela eli xesha lomlutha obizwa ngokuba yiClumsy Climber apho kufuneka sisinde kukufa okuthile ngoncedo lweengalo zethu. Ngalesi sikhokelo, isikhokelela kumdlalo olutha kakhulu, njengoko le studio yevidiyo isisebenzisile iminyaka embalwa kwizixhobo eziphathwayo.
Kwaye kukuthetha inyani, uKetchapp ngalo lonke ixesha sisenza izisa imidlalo ngobunzulu obukhulu okanye ngamanqanaba, ngaphambili kwakuphantsi koomatshini oomatshini kuphela ukuze babambeke ngaphandle kokuba sikwazi ukwenza nantoni na. I-Clumsy Climber isizisela amanqanaba, ukuvula izinto kunye nezinye iinkcukacha.
1 Zisindise ekufeni ngokuntywila kwiClumsy Climber
2 Umdlalo othembekileyo ongenathemba
3 Clumsy Climber, yinto eqhelekileyo eqhelekileyo
Zisindise ekufeni ngokuntywila kwiClumsy Climber
I-Clumsy Climber iyasithatha phambi kwaloo mzuzu woyikekayo apho inqanaba lolwandle linyuka kwaye sizifumana silwa ngokungenathemba ukusindisa ubomi bethu ngeengalo zethu. Kwaye zezi ziyakusivumela ukuba sifikelele kwinto leyo yeplanga eba kukugoba okulandelayo kuwo onke amanqanaba anikwa nguClumsy Climber.
Kule nto usebenzisa umatshini wentshukumo yomlinganiswa ophambili apho ingalo emva kwengalo, kwaye enkosi kwimiphunga yethu, ufikelela kwisiqwenga somthi evumela ukuba uthathe swing ngokwaneleyo ukumilisela enye Ke, xa sifuna ukukuqonda oko, sinokukuphepha ukufa ngokurhaxwa ngala manqanaba olwandle angayekiyo ukunyuka.
Ke asizukuba nalo ixesha elininzi Khetha iindawo zokuxhasa kakuhle, kuba ngalo lonke ixesha ingalo iguquka, siya kubona ukubanakho ukwenza ukubetha kwentliziyo xa ijika ibomvu. Oko kukuthi, xa isandla sidlula kwisiqwenga somthi, kuyakufuneka sicinezele ukuqikelela apho siza kuphinda sicinezele khona ukuthatha enye inqaku lenkxaso.
Umdlalo othembekileyo ongenathemba
Ngale ndawo isisiseko, kwaye ndiyabulela ku ujingi ngokungapheliyo kwiingalo zeqhawe lethu Ngubani ofuna ukuzisindisa ekufeni okuthile, siya kuba nazo zonke izixhobo zomdlalo onesihloko esingaphezulu kwesiphumeleleyo kwimidlalo yeKetchapp. Isitudiyo somdlalo wevidiyo othi, enkosi ngokulula kwezihloko zawo, ikwazile ukuba yenye yezona zibalaseleyo kudidi oluqhelekileyo.
KwiClumsy Climber akukho kusilela kwento yokuba sinokuvula umxholo owahlukileyo ngeemali kunye nentengiso esinokuyivelisa kwakhona. NjengokuxabisekileyoSinamazinga ekufuneka siwagqibile ukhenketho lwakho. Ngokufanelekileyo, enye indlela ejikelezileyo kunenye imidlalo yeMidlalo yeKetchapp, Siza kufumana ipesenti yokugqitywa rhoqo xa amanzi ephelisa ubomi bethu.
Le ngongoma enkulu yeClumsy Climber kwaye yintoni eyenza ihluke kwiimpawu ezininzi zeMidlalo yeKetchapp. Ngaphandle kwalonto iyakukhuthaza ukuba uqhubeke nokudlala ukufumana izinto ezintsha koomatshini, ezinje ngamaqhekeza omthi aqhekeka nini sibambelele kubo okanye sinokukhetha ukuxhuma okukhulu apho sinokudlula kwinqanaba elifanelekileyo lenqanaba.
Clumsy Climber, yinto eqhelekileyo eqhelekileyo
Kuko konke oku, ngeClumsy Climber esijongene nayo umntu oqhelekileyo ozivelelayo ngaphambi kweminye imidlalo enje kwiVenkile kaGoogle yokuDlala. Ngokobuchwephesha yenziwe kakuhle, nangona sinokubek 'ityala iMidlalo yeKetchapp esinokuthi sikhethe abalinganiswa abangakumbi bokuzonwabisa. Eso sithunzi singenamakhaphukhaphu ngumdlalo omncinci ongasemva kwawo kwisiseko sawo.
Eminye, enye zezona ndawo zingcono zangoku zokuziphatha esingenako ukuziphosa ukudlala imidlalo elungileyo, kwaye uphumle kweminye imidlalo apho uxinzelelo ludlala ngokuchasene nathi; Chwetheza iPUBG Iselfowuni kunye neendlela zayo ezintsha zomdlalo.
I-Clumsy Climber kukufika okuhle ukusuka kwiMidlalo yeKetchapp ukuya kwiGoogle Play Store ukubambeka kuyo kwaye uqhubeke nokuvula loo manqanaba kunye nazo zonke izixhobo zomlinganiswa ophambili. Mncede angafi ngokurhaxwa, ayikokucetyiswa ukufa.
Yiba namanqanaba okuwagqiba
Ayithathi nzulu ngefomathi ye-18: 9
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Baleka ukufa okuthile ngeengalo zakho kumlutha weClumsy Climber, omtsha ovela eKetchapp